musha NYAYA DZEEEOPEAN Ross Barkley Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'Rossi'. Our Ross Barkley Childhood Nhau plus Biography Chokwadi inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama uye dzakawanda OFF-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemhando yake yakaipa yehutano asi vashoma vanoona Bios Barkley's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Ross Barkley akaberekwa musi we 5th waDecember 1993 muLiverpool, United Kingdom.
Ndiye Sagittarius nekuzvarwa. Akaberekerwa nababa veNigerian, Peter Effanga uyo ari injini yemotokari uye amai veBritain, Diane Barkley (mumba mavarindi).
Ross, pane kupindura Effanga akasarudza kupindura zita remusikana waamai vake 'Barkley'nekuda kweukama hwakashata hwaaiva nawo nebaba vake veNigeria pavaikura.
Ross akatanga kutamba nhabvu nekuda kwekuedza kwababa vake avo sevakabva kune dzimwe nyika, vakaita kuti zvive nyore kuti iye oga mugari wenhaka kutora bhora rake basa rake rinobatsira zvikuru. Izvi ndizvo zvakaitikawo kuvabereki vanoenda kune dzimwe nyika muEurope. Vabereki Leroy Sane, Mesut Ozil, Christian Benteke njodzi ndivo vanobatsirwa zvikuru.
Achishandisa Peter Effanga baba vake, Ross akabatana nhamajo vakatanga kutamba bhora panguva ye11-year-old. Akafambira mberi kuburikidza ne Evertonian youth system. Kunze kwekuita misoro sevechiri kuyaruka, Ross aizivikanwa kuva nekutakura hormone uye geni rakamuita kuti akure kukura kupfuura vezera rake uye kunyange vashori sezvinoratidzwa pasi apa.
Ross Barkley akaona GIANT achiri muduku
Romelu Lukaku uyewo akapupurira zvakafanana kukura chirwere. Zvechokwadi, pa 15, Ross akanga atovhengana nechepasi-18. Izvi zvakaitika nekuda kwemuviri wake wakawandisa wakavakwa. Pane dzimwe nguva, akatungamirira boka rake revechidiki pane kukunda kukuru uye mukukunda michina yakawanda yakadai seEcho Cup yakaratidzwa neveimbova Liverpool boss Rafa Benitez.
Rafa ari kupa chikwata chaRoss
Barkley aitarisira kuita kuti Toffees yake iende mumatangiro ekutanga emwaka we 2010-2011 asi yakanonoka mushure mekunge akatsigira gumbo rakakomba gumbo. Akapikisana neLiverpool's Andre Wisdom paanenge achishanda neEngland Under-19's.
Muna December 2011, nguva pfupi mushure mokushandura 18, akanyora imwe nhepfenyuro yakareba kwenguva refu nhamajo. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Nhanho guru Ross Barkley anozivikanwa kuva nerunyararo, zvinobatsira, sensible, zvinonyatsoitika uye zvizhinji musikana anozvibata, Wag uye anofungidzirwa kuti ave mudzimai. Haasi mumwe munhu kunze kweZoe Riozzi.
Zvichida wakabvunza ..., nei takamurumbidza zvikuru? .... Zvikonzero izvi zvinotevera;
Zoe Riozzi munhu ari pasi-pasi-pasi. Meso ake akaremara-ane mvere anoratidza zvose. Anoda kupfeka jekete yeParka iri nyore pamusoro pebasa rake rakafanana uye rakaputika-shangu shangu panzvimbo yekuuraya zvitsitsinho sezvazvakaita mudzimai wemusikana nemusikana.
Akazozivikanwa nokuda kwehupenyu hwake hwepasi-pasi apo akatanga kutanga kudanana neRos panguva yemakore ekuyaruka.
Iye ane mhosva uye anoremekedzwa nekuchengeta tsoka dzaBarkley pasi. Ane simba rakasimba pamusoro pemurume weEngland. Kusiyana nemutambo weruzhinji WAGS, Zoe haafariri zvinhu zvakadai semari uye mukurumbira. Ichokwadi, iye ane £ 9 per hour nursery school school.
Mararamiro ake akafanana neaya Wayne Rooneymudzimai waColeen Rooney uyo akambodzwa kuti akachengetedza nyika yeEngland yaimboenda-chengetedza. Iwe Zoe wakadzika kupfuura Coleen kana uchienzaniswa naye pasi-pasi-pasi.
Vakaroorana, vose vari muzera rimwe chete, vanobva munzvimbo imwechete yeLiverpool neshamwari vanoti ukama hwavo ndewe 'kuenda nesimba'. Chaizvoizvo, hukama hwavo hwakabva pane simba-kusvika-simba.
Pasinei nemukomana wake achangoberekerwa kubudirira uye £ 40,000 vhiki yevhiki inotarisirwa kusimuka nokukurumidza, Zoe akasarudza kuendesa motokari inotyisa zvikuru motokari ingambotyaira. Panzvimbo peBentleys neRange Rovers mavhiri akawanda anoshandisa kuenderera mberi, Miss Zoe Riozzi akasarudza kuva shure kweguru re Fiat 500 ine mwero. Anofambisa tsini yepasi Fiat500 iyo inodhura £ 4,000 chete.
Zoe Riozzi mararamiro ari pasi-pasi-pasi
Vose vanodikanwa vanoda kushanyira Buckingham Palace uye Dubai. Imwe hovha inobhururuka mufananidzo weZee we twitter inoratidzira ivo nedziva pane kupera kwezuva. Akatarisa zvakanakisa apa.
Zoe Riozzi anoshandisa zororo neRoss
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -unhu
Ross is Sagittarius nekuzvarwa. Ane chirevo chinotevera maererano nehupenyu hwake hwezodhiac.
Ross Barkley's Strengths: Anogutsa, anofungidzira uye pfungwa huru yekuseka.
Utera hwa Ross Barkley: Zvipikirwa zvinopfuura zvinogona kununura, kushivirira zvikuru, zvichati chero chinhu pasinei nokuti unopindirana sei.
Chii Ross Barkley anoda: Rusununguko, kufamba, uzivi uye kuva kunze.
Chii Ross Barkley asingadi: Vakanamatira vanhu, vachimanikidzwa uye kunze kwe-the-wall dzidziso.
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -The Great Punch
Horrific footage kamwe yakabuda ichiratidza Ross Barkley achigumburwa kunze kwechirwere chekutuka. Akarohwa kune rumwe rutivi rwechiso asati awira pasi.
Gweta reBarkley akati akabatwa nea "Kusagadziriswa kurwiswa nemumwe munhu wausingazivi akauya kwaari".
Kurwisana kwakaitika muSanta Chupitos muchengeti wekudya muLiverpool muguta iri mumavambo ekutanga ano mangwanani ano. Yakasvika maawa mashomanana mushure mokunge boka rake rakagamuchira 4-2 kukunda pamusoro peLeicester City kuGoodison Park.
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Hongu, sekushamisika sezvaungave uri, izvi ndezvechokwadi. Ross Barkley anobva kuNigeria chizvarwa.
Kunyange sekuru vake vari muNigerian.
Kunge Dele Alli, Barkley akaramba kutamba kuNigeria. Akanga akakodzera kuenderera kuSain Eagles asati aita chikwata chake chekukwikwidza kuEngland senior squad mu2013.
Asati atanga kusvika kuMoldova muChikwata cheNyika Cup, Ross akambotaura kuti Nigeria ndiyo imwe yenyika dzaangadai akamira kunze kweEngland. Vose baba vake, Engineer Peter Effanga uye amai, Diane Barkley vachiri kugara muLiverpool.
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kushungurudzika kweRicism
Paunenge uine chena, kuva nemumwe wemubereki wako kana Ancestors kubva kuAfrica mhosva?
nhamajo kamwe rakarambidzwa The Sun tabloid kubva panzvimbo yayo pane imwe nyaya pamusoro paRoss Barkley avo vatsoropodzi vakataura "Racist".
Columnist Kelvin MacKenzie achifananidza Barkley, uyo ane tateguru kubva kuNigeria, kune a "Gorilla paz zoo" uye akati ivo chete vamwe vanhu muLiverpool nemari yake yaive vatengesi vezvinodhaka.
Nyaya yacho yakanga ichinyorwa "Ndicho chikonzero nei vachienda kuRoss" pamwe nemifananidzo yeBarkley uye gorilla.
Paakaona bhuku iri, Lievespool mairene Joe Anderson akaudza mapurisa uye Independent Press Standards Organisation "Racist uye chinogumbura". Muparidzi weSain News News akataura muchitauriri kuti MacKenzie "Akanga amiswa pakarepo".
Ross Barkley Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Chelsea Snub
Ross akambomira shanduko kuStamford Bridge asi akaita U-turn anoshamisa pazuva rekupedzisira kuti apedze chii chakanga chave chichikanganisa kutenderera kweCentral FC.
Antonio Conte vakadzokera kumashure reRoss Barkley kusarudza kutendeukira kuCentral mushure mekupa mitsarudzo kuti nyika yeEngland yakanga yakabvisa chikamu ichi nekuda kwekusagona kusvika Antonio Conte pafoni.
Reports dzinodaro Antonio Conte's akaita kuti foni yake ichinje kana kuti iri pasi pemirairo kuti isataure neC23 yemakore.
apo verenga akaramba kuti ndiyo yaiva iyo, akafunga nezvekunyengera kuBarkley nekuda kwekusaina. Mumashoko ake ...
'Kana mutambi ane chido chakakura chokutamba kwechikwata chikuru, anoratidza. Dzimwe nguva zvakakosha kuti mutungamiri ataure kune mutambi asati azviratidza. Dzimwe nguva hazvisi. Ndasayina vatambi vakawanda vasingatauri navo. "
Ndinotenda nekuverenga Ross Barkley's Childhood Story pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Wayne Rooney Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts